April 2018 - Khit Minnyo
Q & A April 28, 2018
adb commands တွေကို Kali မှာ သုံးလို့ရလား (Questions & Answers)
Android အသုံးပြုသူ များလာတာနဲ့အမျှ Android Service ပြုလုပ်သူတွေ များလာသလို မိမိတို့ဘာသာ service လုပ်သုံးသူတွေလည်း ရှိလာကြပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် အသစ် ထပ်တိုးလိုက်တဲ့ Q & A (Questions & Answer) မှာတော့ adb command တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Q. Phone Service လုပ်နေလို့ adb command တွေကို သုံးသုံးနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Windows ပဲ အမြဲ ဖွင့်ထားဖြစ်ပြီး Kali ကို ဖွင့်မသုံးဖြစ်တော့ပါဘူး။ Kali မှာ သုံးလို့ ရ မရ သိပါရစေ။
Q. ကျွန်တော်က ဖုန်းကလိပါတယ်။ မကြာခဏ firmware ပြန်တင်ရတတ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာက storage နည်းတာကြောင့် တစ်ခုပဲ တင်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ Kali တင်လိုက်ရင် ဖုန်း ကို fastboot တွေ recovery တွေကို adb နဲ့ သုံးမရတော့မှာ ကြောက်ပါတယ်။
မေးခွန်းတွေ အခြေအနေတွေ အမျိုးမျိုးကွဲပေမယ့် လိုချင်တဲ့ အဓိကအချက်က အတူတူပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
ပထမဆုံးမေးသူတွေအတွက် ဖြေချင်တာကတော့ Windows ပဲ အမြဲ ဖွင့်ထားရတယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးက VirtualBox မှာပဲ Kali တင်သုံးတာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ တင်နည်း မသိပါက ဒီစာကြောင်းကို နှိပ်ပြီး သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အဓိက မေးခွန်းကို ဆက်ဖြေပါမယ်။
Kali မှာ adb command တွေကို သုံးချင်တယ်။ သုံးလို့ ရပါသလား ပေါ့။
Kali မှာ Windows မှာလို usb driver တွေ ရှာထည့်နေရတာမျိုးတောင် မလိုဘဲ အဲထက်ပိုလွယ်ကူစွာ သုံးလို့ ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့် Driver မှ မလိုသလို adb folder ထဲ ဝင်ပြီးမှ လုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတောင် မရှိတော့ပါ။
Terminal ရဲ့ မည်သည့်နေရာကနေမဆို ဖွင့်ကြည့်နိုင် သုံးနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ ပုံမှာလည်း နမူနာအနေနဲ့ ကျွန်တော့် ဖုန်းကို twrp image flash ပြထားပါတယ်။
ဒါဆို ဘယ်လို သုံးရမလဲ????????????
ပထမဆုံး အနေနဲ့ (စ သုံးမယ့် တစ်ကြိမ်သာ) install ဖို့ လိုပြီး size သေးတာမို့ ဘေကုန်ကျမှု အလွန် နည်းပါတယ်။
ထည့်သုံးချင်ရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း install နိုင်ပါပြီ ............
root@kmn:~# apt install android-tools-adb
root@kmn:~# apt install android-tools-fastboot
ထို့ထက်ပိုပြီး သုံးဖို့ လိုအပ်ပါက ဘာတွေကို install ထားနိုင်သေးလဲဆိုတာ အောက်ပါ ပုံမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်နဲ့ ပြထားတဲ့ package name တွေအတိုင်း apt install နဲ့ တွဲဖက် ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။
အားသာချက်ကတော့ Windows မှာ usb driver မသိတဲ့ ဖုန်းတွေကိုလည်း Linux ကနေ flash လို့ ရခြင်းပါ။
ဒီလောက်ဆို ဒီမေးခွန်းလေးကို ဖြေလို့ ပြီးပြီမို့ နောက်တစ်ပတ် အမေးအဖြေ မှာ ပြန်လည် ဆုံတွေ့ကြပါစို့
By KhitMinnyo on April 28, 20182comments:
Kali April 27, 2018
Video Editing Software for Kali Linux (For Free)
Kali Linux အတွက် သင့်တော်တဲ့ Video Editing software လေးတွေ များစွာ ရှိပါတယ်။ ထိုထဲကမှ Free လည်း ရပြီး သုံးရတာ လွယ်ကူတဲ့ Software လေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Mov လေးတွေကို ကိုယ်ပိုင် edit လုပ်လိုသူများအတွက်လည်း Crack ရှာစရာမလို လုံးဝ Free ရနိုင်တာမို့ အဆင်ပြေမယ်လို့ ယူဆပါတယ်ခင်ဗျ ...........................
ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး သုံးရတာ အဆင်ပြေတဲ့ Video Editing Software တစ်ခုပါ။
သူ့ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Kali Linux မှာ ထည့်သွင်းလိုပါလျင်တော့ အောက်ပါ command ကို ရိုက်ထည့်ရုံပါပဲ။
root@kmn:~# apt install kdenlive -y
OpenShot သည်လည်း သုံးရတာ လွယ်ကူတဲ့ Video Editing Software တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကို ထည့်သုံးလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း ရိုက်ထည့်ရုံပါပဲ။
root@kmn:~# apt install openshot -y
သုံးရလွယ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ software တစ်ခုပါပဲ။ ထည့်သွင်းလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း ရိုက်ထည့်ပါ။
root@kmn:~# apt install flowblade -y
Light Works မှာတော့ Free နဲ့ Pro ဆိုတာ ရှိပြီး Free ကို သုံးလိုပါက ဒီစာကြောင်းကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Kali အတွက် Debian Package ကို ဒေါင်းရမှာဖြစ်လို့ dpkg -i နဲ့ install နိုင်ပါတယ်။
တော်တော့်ကို ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ Free Program တစ်ခုပါ။ သဘောကျနှစ်သက်စရာပါပဲ။
root@kmn:~# apt install blender -y
Program ကြီးမားပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်မှု အစုံ ပါဝင်သလို ဖိုင်ဆိုဒ်လည်း ကြီးပါတယ်။ Beta နဲ့ Stable ဆိုပြီး ၂မျိုးထွက်ပါတယ်။ နှစ်မျိုးလုံး Free ပါ။ ဒီစာကြောင်းကို နှိပ်ပြီး ဖောင်ဖြည့် ဒေါင်းယူရပါမယ်။
ဒီတစ်ခုတော့ ကျွန်တော် မသုံးဖူးပါ။ ပြည့်စုံတဲ့ software တစ်ခုလို့တော့ review တွေ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီစာကြောင်းကို နှိပ်ပြီး သွားရောက် လေ့လာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Article လေးက Video Editing တွေကို Kali မှာ သုံးခြင်းအားဖြင့် Linux အသုံးပြုမှု နည်းနေသေးသူတွေကို ပိုပြီး သုံးဖြစ်သွားစေချင်လို့ တင်ပေးလိုက်ခြင်းပါ။
Happy Learning .........
By KhitMinnyo on April 27, 2018 No comments:
Articles April 18, 2018
ကျွန်တော်နှင့် ထော်လော်ကန့်လန့် Fb Hacking အကြောင်း
ကြှနျတျောနှငျ့ ထျောလျောကနျ့လနျ့ Fb Hacking အကွောငျး
နစေ့ဉျ ဘဝမှာ အမွဲတမျး မမွငျခငျြဆုံးအရာ မကွားခငျြဆုံး အရာက Fb acc hack ခံရလို့ ဆိုတဲ့ စကားပါ။
ကြှနျတျောကိုက အမှတျမရှိတာ။ ပွောနကွေတဲ့ လူတှကေို တှတေို့ငျး မေးကွညျ့ဖွဈတယျ။ hack တယျဆိုတာ ဘာပွောတာလဲဟငျ လို့။
"မငျးကလညျးကှာ ဒါလေးတောငျမသိဘူးလား။ Fb acc ကို ဝငျသုံးလို့ မရတော့အောငျလုကျတာပေါ့ကှ" တဲ့။ အားရှိလိုကျတာဆိုတာ။
Fb acc hack ခံရပွနျပွီ။
ငါ့ acc hack ခံရလို့။ စသညျဖွငျ့ပေါ့။ တှမေိ့တာတှကေို စပျစုကွညျ့ဖွဈတယျ။
Account hack ခံရတယျလို့ ဘယျလို သိလဲ လို့ မေးမိပွနျရော။ ဖွတေဲ့ အဖွတှေအေရ
၁။ 99% က Acc ထဲကို ဝငျမရတော့လို့တဲ့။ hack ခံရတာလို့ ဖွပေါတယျ။
Password မေးကွညျ့တော့လညျး ဝါးတားတား။ gmail နဲ့ဖှငျ့တာလား ဖုနျးနံပါတျ နဲ့ ဖှငျ့တာလား ဆိုတာလညျးမသိ။ 😟
Acc ဝငျမရတော့တိုငျး hacker ဆိုတဲ့ကောငျတှေ တရားခံပဲ
၂။ 1% လောကျကတော့ ပွောကွပါတယျ။ Acc ကို ကိုယျလညျး ဝငျမရ၊ သူမြားကလညျး ဝငျသုံးရုံတငျမဟုတျ mail နဲ့ password ပါ ပွောငျးသှားလို့ သိတာပါတဲ့။
ဘယျ့နှယျဗြာ။ hack ပါတယျဆိုကာမှ hack မှနျးသိအောငျ လုပျရတယျလို့ 😁😁
ဘာပဲဖွဈဖွဈ hacker ဆိုတာ တရားခံဖွဈပွနျရောပဲ။
Hacker တဈယောကျအတှကျ အရေးကွီးတဲ့ အဆငျ့တှေ ရှိပါတယျ။ အားလုံးထဲမှာ ခွရောဖြောကျခွငျး ဆိုတာ ပါပါတယျ။
တညျ့ ပွောရရငျ မိမိ ဝငျရောကျသှားမှုကို မသိစရေ။
ဒီတော့ Fb Acc ကို hack မယျဆိုပါစို့။
နညျးလမျးပေါငျးစုံနဲ့ ရအောငျ ကွိုးစားမယျ။ ရတဲ့အခါမှာလညျး ပိုငျရှငျမသိအောငျ ဝငျနမေယျ ဝငျကွညျ့မယျ။ ဒီလိုပဲလုပျကွမှာပါ။
မူလ mail & password ကိုပဲ သုံးမယျ သို့မဟုတျ access ကို ယူသုံးမယျ။ မူလပိုငျရှငျလညျး သိစရာမလို။ ဒါမှသာ သူဘာဆကျလုပျမလဲ စောငျ့ကွညျ့လို့ရမှာပါ။ ဒီတော့ မူလ ပိုငျရှငျကလညျး Fb acc ကို တကျသုံးလို့ ရနမေယျ။ ဒီတော့ သူလုပျခငျြတာ ဆကျလုပျမယျ။ တဈဖကျကလညျး သူဘာလုပျလုပျ သိနိုငျမယျ။
Account ကို recovery ဆှဲမယျ။ mail နရောတှေ အစားထိုးမယျ။ လိုအပျရငျ ID အတုလုပျတငျမယျ။ ပိုပွီးလိုအပျရငျ Acc ပိုငျရှငျ ခဏတာ သုံးမရနိုငျအောငျ acc ကတြဲ့အထိ report လုပျပွီးမှ ပွနျဆယျမယျ။ ဒီလိုနညျးမြိုးတှနေဲ့ Acc ရယူတာကတော့ Hacking ထဲ မပါဝငျဘူးလို့ မပွောလိုပမေယျ့ မတူညီတာတော့အမှနျပါပဲ။ အနှဈသာရခွငျးလညျး ကှဲသလို အခွအေနခေငျြးလညျး ခွားသှားပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ ဒီနိုငျငံက Fb သုံးတဲ့လူတှကွေားမှာတော့ recoverer တှေ ဘာလုပျလုပျ hacker တှေ နာမညျ ပကျြခံရတာပါ။
အဆိုးဆုံးက Hacking ဆိုရငျ မကောငျးတဲ့ပညာရပျလို့ထငျကွ
Hacker ဆိုရငျ ထောငျထဲရောကျမယျ့ကောငျလို့ထငျ
Hacking သငျရငျ တရားမဝငျ ပညာလို့ထငျ
စတဲ့ အလှဲလှဲအခြျောခြော concept အမှားကွီးတှေ ပါသှားတော့တာပါ။
နားလညျတဲ့သူတှကေ အစပိုငျးမှာ ရှငျးပွကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ငါထငျတာအမှနျ ဆိုတဲ့ အစှဲ ကွီးစိုးတဲ့ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာတှရေဲ့ စိတျ အတှေးကွောငျ့ ခံယူခကျြတှေ မှနျလာတဲ့အထိ ပွငျမပေးနိုငျခဲ့ကွပါဘူး
ဒီတော့ နောကျပိုငျးမှာ တကယျ တတျသိ နားလညျတဲ့သူတှကေ လုံးဝ ငွိမျသှားကွပါတော့တယျ။
အမှားတှနေဲ့ နသေားကနြတေဲ့ အမြားစုကတော့ ပိုမြားသထကျမြား မှားသထကျမှားလာကွတော့တာပါပဲ
Fb acc hack ခံရတယျလို့ ပွောတိုငျး စိတျမကောငျး ဖွဈမိရုံမှတပါး....................
နေ့စဉ် ဘဝမှာ အမြဲတမ်း မမြင်ချင်ဆုံးအရာ မကြားချင်ဆုံး အရာက Fb acc hack ခံရလို့ ဆိုတဲ့ စကားပါ။
ကျွန်တော်ကိုက အမှတ်မရှိတာ။ ပြောနေကြတဲ့ လူတွေကို တွေ့တိုင်း မေးကြည့်ဖြစ်တယ်။ hack တယ်ဆိုတာ ဘာပြောတာလဲဟင် လို့။
"မင်းကလည်းကွာ ဒါလေးတောင်မသိဘူးလား။ Fb acc ကို ဝင်သုံးလို့ မရတော့အောင်လုက်တာပေါ့ကွ" တဲ့။ အားရှိလိုက်တာဆိုတာ။
Fb acc hack ခံရပြန်ပြီ။
ငါ့ acc hack ခံရလို့။ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ တွေ့မိတာတွေကို စပ်စုကြည့်ဖြစ်တယ်။
Account hack ခံရတယ်လို့ ဘယ်လို သိလဲ လို့ မေးမိပြန်ရော။ ဖြေတဲ့ အဖြေတွေအရ
၁။ 99% က Acc ထဲကို ဝင်မရတော့လို့တဲ့။ hack ခံရတာလို့ ဖြေပါတယ်။
Password မေးကြည့်တော့လည်း ဝါးတားတား။ gmail နဲ့ဖွင့်တာလား ဖုန်းနံပါတ် နဲ့ ဖွင့်တာလား ဆိုတာလည်းမသိ။ 😟
Acc ဝင်မရတော့တိုင်း hacker ဆိုတဲ့ကောင်တွေ တရားခံပဲ
၂။ 1% လောက်ကတော့ ပြောကြပါတယ်။ Acc ကို ကိုယ်လည်း ဝင်မရ၊ သူများကလည်း ဝင်သုံးရုံတင်မဟုတ် mail နဲ့ password ပါ ပြောင်းသွားလို့ သိတာပါတဲ့။
ဘယ့်နှယ်ဗျာ။ hack ပါတယ်ဆိုကာမှ hack မှန်းသိအောင် လုပ်ရတယ်လို့ 😁😁
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် hacker ဆိုတာ တရားခံဖြစ်ပြန်ရောပဲ။
Hacker တစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အဆင့်တွေ ရှိပါတယ်။ အားလုံးထဲမှာ ခြေရာဖျောက်ခြင်း ဆိုတာ ပါပါတယ်။
တည့် ပြောရရင် မိမိ ဝင်ရောက်သွားမှုကို မသိစေရ။
ဒီတော့ Fb Acc ကို hack မယ်ဆိုပါစို့။
နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ရအောင် ကြိုးစားမယ်။ ရတဲ့အခါမှာလည်း ပိုင်ရှင်မသိအောင် ဝင်နေမယ် ဝင်ကြည့်မယ်။ ဒီလိုပဲလုပ်ကြမှာပါ။
မူလ mail & password ကိုပဲ သုံးမယ် သို့မဟုတ် access ကို ယူသုံးမယ်။ မူလပိုင်ရှင်လည်း သိစရာမလို။ ဒါမှသာ သူဘာဆက်လုပ်မလဲ စောင့်ကြည့်လို့ရမှာပါ။ ဒီတော့ မူလ ပိုင်ရှင်ကလည်း Fb acc ကို တက်သုံးလို့ ရနေမယ်။ ဒီတော့ သူလုပ်ချင်တာ ဆက်လုပ်မယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း သူဘာလုပ်လုပ် သိနိုင်မယ်။
Account ကို recovery ဆွဲမယ်။ mail နေရာတွေ အစားထိုးမယ်။ လိုအပ်ရင် ID အတုလုပ်တင်မယ်။ ပိုပြီးလိုအပ်ရင် Acc ပိုင်ရှင် ခဏတာ သုံးမရနိုင်အောင် acc ကျတဲ့အထိ report လုပ်ပြီးမှ ပြန်ဆယ်မယ်။ ဒီလိုနည်းမျိုးတွေနဲ့ Acc ရယူတာကတော့ Hacking ထဲ မပါဝင်ဘူးလို့ မပြောလိုပေမယ့် မတူညီတာတော့အမှန်ပါပဲ။ အနှစ်သာရခြင်းလည်း ကွဲသလို အခြေအနေချင်းလည်း ခြားသွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဒီနိုင်ငံက Fb သုံးတဲ့လူတွေကြားမှာတော့ recoverer တွေ ဘာလုပ်လုပ် hacker တွေ နာမည် ပျက်ခံရတာပါ။
အဆိုးဆုံးက Hacking ဆိုရင် မကောင်းတဲ့ပညာရပ်လို့ထင်ကြ
Hacker ဆိုရင် ထောင်ထဲရောက်မယ့်ကောင်လို့ထင်
Hacking သင်ရင် တရားမဝင် ပညာလို့ထင်
စတဲ့ အလွဲလွဲအချော်ချော concept အမှားကြီးတွေ ပါသွားတော့တာပါ။
နားလည်တဲ့သူတွေက အစပိုင်းမှာ ရှင်းပြကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါထင်တာအမှန် ဆိုတဲ့ အစွဲ ကြီးစိုးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေရဲ့ စိတ် အတွေးကြောင့် ခံယူချက်တွေ မှန်လာတဲ့အထိ ပြင်မပေးနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး
ဒီတော့ နောက်ပိုင်းမှာ တကယ် တတ်သိ နားလည်တဲ့သူတွေက လုံးဝ ငြိမ်သွားကြပါတော့တယ်။
အမှားတွေနဲ့ နေသားကျနေတဲ့ အများစုကတော့ ပိုများသထက်များ မှားသထက်မှားလာကြတော့တာပါပဲ
Fb acc hack ခံရတယ်လို့ ပြောတိုင်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိရုံမှတပါး....................
By KhitMinnyo on April 18, 2018 No comments:
Kali April 13, 2018
By KhitMinnyo on April 13, 2018 No comments:
Hacking Knowledge April 13, 2018
By KhitMinnyo on April 13, 2018 1 comment:
Kali April 12, 2018
Kali မှာ Kernel Upgrade လုပ်ပြီးနောက် Zawgyi Font မှန်အောင် ရိုက်မရပါက
By KhitMinnyo on April 12, 2018 No comments:
Hacking Online Class
ကျွန်တော်တို့၏ All in One Hacking Training တွင် Online Training Course အနေနှင့် Ethical Hacking Course ကို ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည်။
1.Basic Knowledge Construction
Hacking လေ့လာဖို့အတွက် အခြေခံ လိုအပ်သော သိသင့် သိထိုက် သိထားရမည့် အခြေခံ Knowledge များကို နမူနာ ရှင်းလင်းချက်များနှင့် သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ Preparing ပိုင်းနှင့် knowledge ပိုင်း ဟု နှစ်ပိုင်းခွဲထားပေးပါသည်။ (တစ်ခုချင်းစီတွင် သင်ခန်းစာ များစွာ ပါဝင်ပါသည်)
2.Ethical Hacking (EC Council's CEH modules)
ဒီအပိုင်းကိုတော့ အနည်းငယ်လောက် လေ့လာထားသူများပင်လျင် ကြားသိဖူးကြပါသည်။ EC Council ၏ CEH modules များအတိုင်း အခြေခံ knowledge ခိုင်မာစေရန် တည်ဆောက် သင်ကြားပေးသည့် အပိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ (သင်ခန်းစာ အလွန်များစွာ လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး CEH library နှင့် Hacking Library ဟူသည့် ဖတ်စရာ စာအုပ်ပေါင်း များစွာ ပါဝင်သည့် Online Library လည်း ထားရှိပေးပါသည်)
3.Penetration-testing With Kali (Offensive Security's PWK)
ဒီအပိုင်းကတော့ နာမည်ကျော် Offensive Security ၏ Online Training Course တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာလို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး နားလည်ရ ပိုလွယ်စေရန်အတွက် မူရင်း သင်ရိုးထဲတွင် ချန်ထားခဲ့သည် (requirements ) တွေကိုပါ ထည့်သွင်းထားပေးပါသည်။
Offensive Security's PWK အပိုင်းထဲတွင် ထပ်မံ ပါဝင်သည်များက
PWK (Penetration-testing With Kali) (PWB ပါ ပြင်ဆင်မွမ်းမံဖြည့်စွက်ပါရှိပြီး)
AWE (Advanced Windows Exploitation)
ဟူပြီး သင်ခန်းစာခွဲပေါင်း လေးခု ထပ်မံ ပါဝင်ပါသေးသည်။ တစ်ပိုင်းချင်းစီတွင် ပါဝင်သည့် သင်ခန်းစာ အလွန် များသည့်အတွက် အသေးစိတ် မဖော်ပြတော့ပါ။
SANS ထဲမှာတော့ သင်ခန်းစာကွဲ အများဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
'SANS 401 - Security Essentials Bootcamp Style'
'SANS 408 - Windows Forensic Analysis'
'SANS 410 - ICS & SCADA Security Essentials'
'SANS 502 - Perimeter Protection In-Depth'
'SANS 503 - Intrusion Detection In-Depth'
'SANS 504 - Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling'
'SANS 505 - Sans Securing Windows with PowerShell'
'SANS 506 - Securing Linux & UNIX'
'SANS 507 - Auditing & Monitoring Networks, Perimeters & Systems'
'SANS 508 - Advanced Digital Forensics and Incident Response'
'SANS 509 - Securing Oracle Database'
'SANS 511 - Continuous Monitoring and Security Operations'
'SANS 512 - Security Leadership Essentials for Managers'
'SANS 517 - Cutting Edge Hacking Techniques'
'SANS 518 - Mac Forensic Analysis'
'SANS 524 - Cloud Security Fundamentals'
'SANS 526 - Memory Forensics In-Depth'
'SANS 531 - Windows Command Line Kung Fu'
'SANS 542 - Web App Penetration Testing and Ethical Hacking'
'SANS 560 - Network Penetration Testing and Ethical Hacking'
'SANS 566 - Implementing and Auditing the Critical Security Controls - In-Depth'
'SANS 572 - Advanced Network Forensics and Analysis'
'SANS 577 - Virtualization Security Fundamentals'
'SANS 580 - Metasploit Kung Fu for Enterprise Pen Testing'
'SANS 610 - Reverse-Engineering Malware_ Malware Analysis Tools and Techniques'
'SANS 617 - Wireless Ethical Hacking, Penetration Testing, and Defenses'
'SANS 642 - Advanced Web App Penetration Testing, Ethical Hacking, and Exploitation Techniques'
'SANS 660- Advanced Penetration Testing, Exploit Writing, and Ethical Hacking'
'SANS 710 - Advanced Exploit Development'
'SANS 760 - Advanced Exploit Development'
အထက်ပါ modules တစ်ခုစီထဲတွင် သင်ခန်းစာ ခေါင်းစဉ်ပေါင်း များစွာ ပါဝင်နေသည့်အတွက် တစ်ခုစီ ဖော်ပြရန် အဆင်မပြေသဖြင့် နားလည်ပေးစေလိုပါသည်ခင်ဗျာ။ (ဖော်ပြထားသမျှသည် course တစ်ခုချင်းစီ၏ ခေါင်းစဉ်သာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ)
မှတ်ချက်။ ။ SANS တွင် Course များ အလွန် များသည့်အတွက်တော့ အပြောင်းအလဲ အတိုးအလျော့ ရှိနိုင်ပါသည်။
Online Course ဖြစ်ခြင်းကြောင့်
၁။ အချိန် နှင့် နေရာ အခက်အခဲမရှိခြင်း
သင်တန်းခန်းမကို နေ့စဉ် အချိန်အတိအကျနဲ့ သွားစရာ မလိုသလို ဘယ်မြို့ ဘယ်နယ်ကမဆို မိမိတို့ အိမ်မှာ နေရင်းက တက်လို့ ရပါသည်။
၂။ အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် လေ့လာနိုင်ခြင်း
သင်ခန်းစာများကို အကြိမ်ကြိမ်အထပ်ထပ် ပြန်ကြည့်နိုင် နားထောင်နိုင်ပါသည်။
၃။ မတတ်ဘဲ သင်တန်းပြီးဆုံးသွားမှာ မပူရခြင်း
Online Training ဖြစ်သည့်အပြင် Lifetime Access ပေးထားသည့်အတွက် သင်ခန်းစာ အားလုံး ကျွမ်းကျင်သည်အထိ မိမိတို့ တတ်နိုင်သလောက် အချိန်ကိုသာ ဖဲ့ပေးရန် လိုပါသည်။ နှစ်နှစ် နှင့် သင်ခန်းစာ ကုန်အောင် မလေ့လာနိုင်ပါက သုံးနှစ်၊ လေးနှစ် စသည်ဖြင့် မိမိတို့ အဆင်ပြေသည့်အချိန်ထိ လေ့လာနေလို့ ရပါသည်။
၄။ အသစ် အသစ်သော ထပ်ဆောင်း သင်ခန်းစာများ ရရှိနိုင်ခြင်း
နည်းပညာများသည် အစဉ်အမြဲ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပြီး အဆိုပါ နည်းပညာများအရ ထပ်မံ Upgrade တိုးမြှင့်ပေးသော သင်ခန်းစာများကို မည်သည့် အခကြေးငွေမျှ ထပ်ပေးစရာမလိုဘဲ လေ့လာနိုင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
FAQ (အမေးများသည့် မေးခွန်းများ)
1. သင်တန်းကြေး ဘယ်လောက်ပါလဲ။
သင်ခန်းစာများ အားလုံးအတွက် အစအဆုံး သင်တန်းကြေး 150,000Ks ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ် တစ်အုပ် အခမဲ့ ပေးပါတယ်။ (စာအုပ် ဝယ်ယူထားပြီးသူများအတွက်တော့ 140,000 Ks သာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ် မပါတော့ပါ)
2. သင်တန်းတက်ဖို့က အချိန် ဘယ်လောက် ကြာမလဲ။
သင်ခန်းစာ အားလုံး ပြီးဆုံးတဲ့ထိ ဆို အချိန် အနည်းဆုံး ၂နှစ် ကြာပါမယ်။ ထို့ထက်လည်း ပိုကြာနိုင်ပါတယ်။
3. သင်တန်းတက်ဖို့အတွက် ဘာတွေ လိုအပ်လဲ။
၁။ ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာ တစ်လုံး ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
၂။ ကွန်ပျူတာ အခြေခံ တတ်ဖို့ လိုပါတယ်
၃။ သင်တန်းအတွက် register လုပ် စာရင်း ပေးသွင်းထားပြီးသူ ဖြစ်ရပါမယ်။
၄။ သင်တန်းစည်းကမ်း လိုက်နာနိုင်ရပါမယ်။
၅။ တကယ်တမ်း တတ်မြောက်ချင်တဲ့စိတ် နဲ့ ဇွဲ ရှိရပါမယ်။
4. သင်တန်းတက်ပြီးရင် ဘာတွေ ဆက်လေ့လာဖို့ လိုသေးလဲ။
သင်တန်းက သင်ပေးမယ့် သင်ခန်းစာ အားလုံး ကုန်တဲ့ထိ တတ်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
5. သင်တန်းက ညမှ အားတဲ့သူတွေ တက်လို့ ရလား။
မိမိအားတဲ့အချိန်၊ မိမိရောက်နေတဲ့နေရာမှာ အင်တာနက်လေး ဖွင့်လိုက်ရုံနဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး မိမိတို့ အားလပ်ချိန်နဲ့ ခန့်မှန်းပြီး (တစ်ပတ်စာ သို့မဟုတ် တစ်နေ့စာ) Offline အနေနဲ့ ရယူထား နိုင်ပါတယ်။
6. နှစ်နှစ်အတွင်း သင်ခန်းစာ မကုန်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
နှစ်နှစ်အတွင်း သင်ခန်းစာ အားလုံး မပြီးဆုံးပါကလည်း နောက်နှစ်တွေထိ ဆက်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ (ထပ်ပေးစရာ လုံးဝ လုံးဝ မလိုတော့ပါ)
7. သင်တန်းအပ်ပြီးသူတွေကရော သင်တန်းကြေး ထပ်တိုးရင် ထပ်တိုးပေးရသေးလား။
သင်တန်းမှာ လက်ရှိ တက်ရောက်နေသူ မည်သူမဆို ထပ်တိုးသင်ခန်းစာများကို အခမဲ့ ဆက်လက် တိုးမြှင့် ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့် အခကြေးငွေမျှ ထပ်မံ ပေးစရာ မလိုပါ။
8. Register ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ
Register လုပ်လိုပါက ကျွန်တော်တို့ All in One Hacking Training ရဲ့ Facebook Page Message Box m.me/AllInOneHackingTraining မှ ဖြစ်စေ
09 976 41 3560 သို့ ဖုန်းဆက်ပြီး ဖြစ်စေ
Viber မှဖြစ်စေ ဆက်သွယ်စုံစမ်း စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
By KhitMinnyo on April 11, 2018 No comments:
Hacking Techniques April 06, 2018
By KhitMinnyo on April 06, 2018 1 comment:
စာအုပ်လေး ဒေါင်းမယူရသေးခင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အနည်းငယ် ပြောပြလိုတာလေးတွေ ရှိပါသည်။
ဒီ Free Version လေးကို Pdf ထုတ်ပေးရခြင်းက
၁။ Hacking လေ့လာနေသူတွေအတွက် အထောက်အကူ ရဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ အချို့သောနေရာဒေသတွေကို ရောက်နေပြီး စာအုပ်ဝယ်ယူရ ခက်ခဲနေသူတွေအတွက်ကိုလည်း ရည်ရွယ် ပါတယ်။
၃။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စာအုပ် မဝယ်ယူဖြစ်သူတွေအတွက်လည်း ရည်ရွယ် တင်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်လေးကို ဝယ်ယူအားပေးထားကြသူတွေအတွက်တော့ စာအုပ်လေးရဲ့ စာမျက်နှာ ၁၁ မှာ ပါရှိတဲ့ Member Form ကို ဖြည့်ပြီး Facebook Page Message Box သို့မဟုတ် Viber 09976413560 တို့ကို ပြန်လည် ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့် >>> Book Member Site <<< မှာ EC Council ရဲ့ CEH Course လိုမျိုး သင်ခန်းစာတွေကို မြန်မာလို ရှင်းပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့တကွ ပြည့်စုံစွာ လေ့လာနိုင်ကြမှာပါ။
ဒါ့ပြင် စာအုပ်ထဲမှာ ပါဝင်ပြီး မိမိတို့ လိုက်လုပ်ရ ခက်ခဲနေတာတွေကိုလည်း မေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုဝန်ဆောင်မှုကိုတော့ စာအုပ် မူရင်းကို ဝယ်ယူအားပေးထားသူများသာ ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ယခု Pdf Version ကို ဒေါင်းယူသုံးနေသူတွေအတွက်တော့ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုမျိုး ပေးဖို့ အဆင်မပြေပါကြောင်း ကြိုတင် တောင်းပန်ထားပါရစေခင်ဗျ
Free pdf Version လေးကို ဒေါင်းယူရန်အတွက်ကတော့ အောက်ပါ link တွေကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းရုံပါပဲခင်ဗျာ
2MB size pdf Download links
>>>>>>> Mediafire Link <<<<<<<
>>>>>>> Google Drive Link <<<<<<<
5MB size pdf (စာမျက်နှာ ပိုများပါသည်)
>>>>> Click Here To Download (Mediafire Link) <<<<<<<
စာအုပ် ဝယ်ယူရတဲ့ တန်ဖိုးထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုမိုသာလွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အတူ Hacking ကို ပိုပြီး နက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာလိုသူတွေအတွက် စာအုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုမို သိရှိလိုပါက ယခု စာကြောင်းကို နှိပ်ပြီး သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဝယ်ယူအားပေးလိုပါက Facebook Page Message Box မှ ဖြစ်စေ၊ Viber 09 976 41 3560 မှ ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဆက်ပြီးဖြစ်စေ စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Hacking နယ်ပယ်ကို လေ့လာနေသူများအတွက် လိုအပ်သော ပညာရပ် အားလုံးကို တစ်နေရာတည်းမှာ ပြည့်စုံစွာ သင်ယူလိုပါလျင်တော့
All in One Hacking Training ရဲ့ Online Training Class အကြောင်းကို ဒီစာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီ site မှာ တင်ထားသမျှတွေကိုပါ အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်စေဖို့နဲ့
Hacking နဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို လေ့လာလိုသူတွေအတွက်တော့
Myan Hacking (Android Application) ကို ဒေါင်းယူထားနိုင်ပါတယ်။
>>>>> Download Android Apk <<<<<
လာရောက် ဖတ်ရှုသူအပေါင်းကို အထူး ကျေးဇူးပါ
By KhitMinnyo on April 06, 20185comments: